28 novambra 2010 – Advento I – FJKM Ambavahadimitafo 28 novambra 2010 – Advento I |
28 novambra 2010 – Advento I
Publié le 28 novembre 2010 à 01:11
Raha mbola miandry ny olona ka nisalasala ary tsy afaka nanavaka an’i Jesoa sy Jaona Mpanao Batisa dia efa afaka namaky izay tao an’eritreritr’izy ireo sahady i Jaona. Io fahafantarana ny zava-miafina ao ambadiky ny hita maso io no maha Mpaminany an’i Jaona, ilay Mpaminany farany indrindra mialoha ny fihavian’i Jesoa. Io fiandrasana an’i Jesoa io no vontoatin-kafatry ny Advento saingy nirahina ny Mpaminany Jaona hitarika ny olona hifantoka amin’ny Ilay ho avy dia ny Mesia; Ilay voahosotra hamonjy izao tontolo izao. Samy miandry fanovana sy fanatsarana ny zava-misy isanandro isika ary miaina ao anaty fitaintainana mandrakariva noho ny herisetra sy ny tsy fahampiana ary ny endri-pahafatesana manindrontsindrona sy te-hitelina antsika velona. Ny mampiavaka ny kristianin’ny Advento sy ny mpiangona mivavaka amim-pahazarana dia ny fifantohantsika amin’Ilay ho avy; Ilay mahery noho Jaona, i Jesoa Ilay hanome ny Fanahy Masina ary hameno ny banga amin’izay tsy vitan’i Jaona. Jaona izay manao Batisa amin’ny rano ihany. Ny afo eto dia voambolana ilazan’i Jaona ny lela mitarehin’afo hilatsaka amin’ny Mpianatra; saingy mbola nandrasana ihany koa ny filatsahan’izany. Tsy nomena anefa ny Fanahy Masina raha tsy tamin’ny andro pentekosta ary nomena mba hanefan’ny mpianatra ny zara fanompoany. Ny Batisan’ny rano ataon’ny Fiangonana ankehitriny dia miaraka amin’ny fanomezana ny Fanahy Masina ny zaza sy ny olon-dehibe atao batisa. Ety an’efitra isika ankehitriny; tsy misy fitsaharana; tsy misy famonjena ary tsy fantatra izay avoaky ny ampitso. Saingy hafa kokoa izay miandry satria efa nomena azy ny Fanahy fa tsy mba toy izay tsy mahatsiaro fa nandray izany Fanahy izany. Avelao hanjaka ao am-ponao ny Fanahy Masina ry Havako!
Ny Mpitandrina anareo Dr Rakotoniera Christian Eric